Filtrer les éléments par date : mardi, 17 novembre 2020
mardi, 17 novembre 2020 22:31
Tsy efa ilaina masotsivana amin'izay ve ireo afaka hilatsaka ho fidiana Député
Pilo kely : Tsy efa ilaina masotsivana amin'izay ve ireo afaka hilatsaka ho fidiana Député fa tsy hionina fotsiny hoe izay lanim-bahoaka?
Solombavam-bahoaka voafidy tao Ambilobe milako SG Kaominina.
(Sary nalaina sy nindramina tanaty vidéo)
mardi, 17 novembre 2020 22:23
Toamasina : Hohajariana ny Boulevard Ratsimilaho ary hakarina ny haavony
Hohajariana ny Boulevard Ratsimilaho ary ampiakarina hatramin'ny 6 metatra ny haavony mba tsy ho ravan'ny loza voajanahary tahaka ny teo aloha.
Ankoatra izay dia natolotra amin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fanajariana ny lalana miainga avy eo Morafeno mivoaka eo amin'ny Hopitaly Be, izay hanala ny fitohanana ao an-tampon-tanànan'i Toamasina.
Narafitra natao "béton" ity lalana ity mba hateza sy haharitra aman-taona maro ary malalaka ahafahan'ny fiara hivezivezy. Nasiana lalana natokana andehanan'ny mpandeha an-tongotra.
mardi, 17 novembre 2020 22:06
Kitra – Fifanintsanana CAN 2021 : Voatazon’ny Barea sahala 1 noho 1 ny Elefantan’i Côte d’Ivoire
1 noho 1, io no isa nisarahan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, nandritra ny lalao miverina natao tao amin’ny Kianja Barikadimy Toamasina androany tolakandro.
Ny Ivoariana no nahatafiditra baolina voalohany teo amin’ny minitra faha-15, taorian’ny penalty nodakan’i Franck Kessié, izay isa tokana nentin’ny ekipa roa tonta niala sasatra.
Nosahalain’ny Barea tamin’ny alalan’i Ibrahim Amada, kapiteny, tamin’ny daka mandrivorivo avy any amin’ny 30m, teo amin’ny minitra faha-51, ary io isa sahala 1 noho 1 io no nisarahan’ny roa tonta.
Sambany teo amin’ny tantaran’ny lalao nifanandrinan’ny ekipam-pirenena malagasy sy ivoariana no ady sahala, fa saika nibata fandresena hatrany i Côte d’Ivoire.
Samy manana isa 7 mitovy i Côte d’Ivoire sy Madagasikara taorian’ny andro fahaefatra ny lalao ao amin’ny vondrona K misy antsika.
Nandresy 3 noho 0 an’i Niger i Ethiopie androany, lalao natao tany Ethiopie ary mametraka an’ity firenena ity eo amin’ny laharana fahatelo vonjimaika, manana isa 6, ao amin’ity vondrona K ity.
mardi, 17 novembre 2020 22:01
Fanondranana olona an-tsokosoko : Karohina fatratra Ramatoa Maria
Namoahan’ny Zandary avy amin’ny sampana manao fikarohana momba ny heloka bevava filazana fikarohana i Rasoanahinatina Francia Maria, na antsoina hoe Maria.
Tompon’ny sambo kely mpitatitra olona an-tsokosoko mandeha atsy amin’ny nosy Mayotte ity olona karohina ity.
mardi, 17 novembre 2020 21:54
Tetikasa « MIAMI » : Natomboka ny dingana voalohan’ny asa izay haharitra 5 volana
Natomboka ny dingana voalohany amin'ny tetikasa MIAMI ao Toamasina, dia ny fanajariana ny tapany avaratra manomboka amin'ny Hopitaly Be mifarana eo amin'ny Neptune izay mirefy 560m.
Ao anatin’izany no ametrahana rarivato mirefy 800m, izay manaraka ny endriky ny sisin-dranomasina, ary hiaro ny foto-drafitrasa amin'ny onjan-dranomasina sy ny rivodoza.
Hohajariana tanteraka ny moron-dranomasina hahafahana mametraka ny fototra ijoroan'ireo fotodrafitrasa : dia ny "Jardin des amoureux", ny "skate-park", ny fanaovana fanatanjahantena an-kalamanjana, sy ny tapany voalohany amin'ny toerana hipetrahan'ireo mpivarotra voanio.
Haharitra 5 volana ny fanatanterahana ity dingana voalohany ity ary hitohy avy hatrany ny dingana faharoa hatrany amin'ny faha-efatra farany.
mardi, 17 novembre 2020 21:53
Antenimierandoholona : Miezaka hatrany hamita ny asa na tsy nomena vola aza
Nanatontosa fivoriana azon’ny besinimaro natrehina ny Loholon'i Madagasikara ny talata 17 novambra 2020. Fivoriana nentina nifanankalozana ny mahakasika ireo raharaha anatiny eo anivon’ny Antenimierandoholona.
Lahadinika tamin’izany ny momba ny fitantanana ny tetibolan’ny Antenimierandoholona sy ny ho fizotr’izao fivoriana ara-potoana faharoa izao.
Nandritra io fotoana io no nanaovan’ny kestiora voalohan’ny Antenimierandoholona Abdirassoul Mourad tatitra fohifohy mahakasika ny fampandehanana sy fitantanana ara-bola eo anivon’ity Andrimpanjakana ity.
Nanambarany fa tsy nomena ny ampahan’ny teti-bolan’ny Antemierandoholona izay voafaritra tao anatin’ny lalàna mifehy ny tetibola-panjakana nasiam-panitsiana, ary mbola tsy misokatra ny SIGFP hoan’ity Andrimpanjakana ity hatramin’izao.
mardi, 17 novembre 2020 12:55
Hôpital Commune Rurale Antsambaharo Sambava
(Voir suite Photos Joseph Benitsiafantoka)
mardi, 17 novembre 2020 08:45
Mila jerena ity trano fiantohana ity, tena mora tokoa izy, ary lasa any avokoa ny ankamaroan'ny fiara mpitatitra na ireo fiara tsotra maro.
Lasa taratasy hialàna Polisy sy Zandary fotsiny anefa izany, fa ny tena olana, dia ny trano fiantohana miantoka ny fiara diso no mandoa ny vola ho an'ny trano fiantohana ho an'ilay fiara voadona, na olona tradoza.
Ny MAMA anefa tsy mandoa vola ka tsy mety andoa vola ihany koa ireo trano fiantohana hafa.
Asa iza no ministera misahana azy ity, fa manimba ny asa fiantohana ny fisian'ny trano fiantohana tsy mandoa vola toy izao.
Dia tratran'ilay hoe, aza mba MAMA ihany ny assurance n'ny adve fa miala maina.
mardi, 17 novembre 2020 08:42
Hetsika iraisam-pirenena hoan’ny Faritra : Hiantomboka eto amin’ny Faritra Analamanga ny andiany voalohany
Hotanterahina ny 26 hatramin’ny 28 novambra ho avy izao ny “Hetsika iraisam-pirenena hoan’ny Faritra”.
Andiany voalohany io, ary eto amin’ny Faritra Analamanga no hisantarana azy, izay hatao manoloana ny Lapan’ny Tanàna etsy Analakely-Antananarivo.
Ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny no nipoiran’ity Tetik’asa iray lehibe izay ifandrombonany amin’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ary handraisan’ireo ministera maro samihafa anjara sy ny sehatra tsy miankina.
Trano eva miisa 70 no handray anjara hampiranty ny mampiavaka an’Analamanga mandritra ny hateloana haharetan’ny hetsika.
Hisy ny loabary andasy hiarahana amin’ireo ministera hafa sy ireo mpiara-miombon’antoka. Fotoana izany hifanankalozan-kevitra momba ny fampandrosoana ny faritra Analamanga.
mardi, 17 novembre 2020 07:55
Barea : Vononana ara-moraly ny mpilalao
Lalao lehibe no hatrehin’ny Barea an’i Madagasikara anio, tafiditra amin’ny fifanintsanam-bondrona hahazoana tapakila ho amin’ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra, izay hatao any Cameroun.
“Mahafaly ny milaza amintsika rehetra fa tsy nisy ny naratra, ny zava-dehibe koa dia hita soritra amin'ny tsirairay ny fahavononana ara-moraly sy ny fiaraha-monina mahafinaritra eo amin'ny samy mpilalao”, hoy i Nicolas Dupuis mpanazatra ny ekipa nasionaly.
Mpanohana marobe no ao andamosin’ny Barea, manohana sy mankahery ary miandrandra vokatra tsara anio.